Indawo yokuhlala engasebhishi itholakala kahle ukuze uhlole isifunda sase-East Cape, ukudoba okudumile kwase-Waihau Bay, noma ukuphumula endaweni ekahle yolwandle.
Eceleni kolwandle lwase-Oruaiti oluphephile nolunesihlabathi ngobuhle obumangalisayo ( osesithombeni) - abaningi bacabanga ukuthi luhamba phambili e-East Cape Area.
Ngemva kokuzinza efulethini lakho elibanzi elizimele, khululeka - jabulela ukudoba, ukubukwa okumangalisayo kolwandle, noma ukuhlola ulwandle - bese uqedela usuku lwakho ucwiliswe ukushona kwelanga okumangalisayo kwe-Waihau Bay.
Uma ufuna indawo enhle yamaholide engasebhishi engangonakalisiwe, i-Oceanside e-Waihau Bay e-Eastern Bay of Plenty, esifundeni sase-East Cape, eNew Zealand iyisinqumo esihle kakhulu.
Isitezi esingaphansi sonke sesakhiwo esingaphambili, leli fulethi elikhulu elinamagumbi amabili okulala linendlovukazi eyodwa, ikamelo elilodwa elinamawele ikhishi elihlome ngokuphelele kanye nepulani elikhulu elivulekile lokuhlala-lendawo yokudlela. Kukhona neminye imibhede emibili engashadile kule ndawo (elala eyisithupha isiyonke). Thatha ukudla kwakho ngaphakathi noma ngaphandle, ujabulele itafula lakho ngaphambili- uzobona ukushona kwelanga okumangalisayo phezu kwamanzi kunoma iyiphi indawo.
Siphinde sibe nendawo yokupaka izikebhe etholakala esizeni.
Uzothola indawo yakho yokuhlala inethezekile futhi ihlome ngakho konke okudingayo, kodwa ingxenye ekhetheke kakhulu ye-Oceanside yile ndawo emangalisayo - thola ukuthula, hamba ogwini olunesihlabathi, phonsa umugqa bese ubamba isidlo sakusihlwa! buka ulwandle.... futhi ungakhohlwa ukuthatha isikhathi sokushona kwelanga okumangalisayo.
4.67(43 okushiwo abanye)
4.67 · 43 okushiwo abanye
I-Oceanside Apartments iyindawo ekahle yokuma ohambweni lwakho lwase-East Cape, noma ikhefu elide...
mhlawumbe abashadikazi bahlehla endaweni ethule kodwa enhle yolwandle ....noma iholide lomndeni ngaphandle kokuphithizela kwezindawo ezinabantu abaningi.
Ulwandle luyipharadesi lomndeni... izindawo ezinesihlabathi, ukubhukuda okuphephile, i-snorkeling, ama-rock pools ongawahlola, futhi lapho amagagasi aphansi – alungele umdlalo wekhilikithi noma we-volleyball.
Ukubaleka nganoma yisiphi isikhathi kunoma ubani - lalela amagagasi, bukela ulwandle, uhambe ogwini lolwandle, buka ukushona kwelanga okumangalisayo, bheka isibhakabhaka esimangalisayo ebusuku - akukho ukungcola okuncane.
Indawo yephupho lomdobi - kungakhathaliseki ukuthi indawo yokutshuza emanzini ogwini noma emadwaleni, noma ukudoba okudumile kwazo zonke izinhlobo.
Indawo yokuhlala - sinikeza amafulethi amathathu amakhulu azimele, ngalinye linamakamelo ahlukene alala kusukela ku-1 kuya ku-7 abantu. Jabulela ukubukwa okuhle ngenkathi usebenzisa amakhishi ethu ahlome ngokuphelele, noma uphumule endaweni enkulu evulekile yokuhlala.
I-Oceanside ibekwe kahle ukuze uhlole izindawo ezizungeze i-Whanarua Bay, i-Cape Runaway, i-Lottin Point, i-Hicks Bay, i-Te Araroa, ne-East Cape Lighthouse - konke kungakapheli imizuzu engu-45 ukushayela.
DUZE: ngenkathi i-Waihau Bay isuswe ngokujabulisayo esiphithiphithini sezindawo eziningi zentengiso, ungathola zonke izinto ezibalulekile ezijwayelekile.
I-Waihau Bay Camp Store: thatha ukudla, u-ayisikhilimu, ikhofi nezinye izinto zegrosa- 1.5km eceleni komgwaqo noma ogwini, ukukhetha kwakho!
I-Waihau Bay Lodge: ukudla kanye nebha yehhotela, 5km eduze kwe-Bay.
I-Waihau Bay Store: itholakala eduze kwe-Lodge, ukuze kuphinde kuthathwe izinto ezithengwayo, ikhofi, igilosa namaphampu kaphethiloli.
Eyaziwa njengenye yezindawo zokudoba ezihamba phambili eNew Zealand, kuningi kakhulu...
I-East Cape iyindawo eqhelile, enezindawo ezinhle ezisogwini, izindawo ezingaphambili ezinamatshe, amabhishi agcwele i-driftwood kanjalo namabhishi okubhukuda anesihlabathi aphephile.
Okungakathintwa intuthuko, azikho izindawo zokudlela eziphakeme noma ezisheshayo lapha - ulwandle oluhlanzekile nje, imifula ehlanzekile, iziteshi zenyama yenkomo neyezimvu ezingemuva, izimpophoma ezicwebile, isifunda esicwile emlandweni.
Kuyindawo yalabo abafuna ukuthula, ukuphumula nokuphumula kanye nenkundla yokudlala yabazingeli abakhuthele, kanye nephupho lomdobi.
Isimo sezulu esipholile siyenza ibe indawo ekahle yokuvakasha unyaka wonke.
Njengoba singahlali esizeni, ungase ungasiboni nhlobo- kodwa sihlala sitholakala nge-imeyili noma ngocingo, nganoma imiphi imibuzo noma imibuzo.
Zizwe wamukelekile kakhulu ukuxhumana nathi nganoma yisiphi isikhathi.